Shirkadda Google oo dhisaysa Magaalo dhan oo ‘Internet-ka’ ku shaqaysa | Allbanaadir News
Shirkadda Google oo dhisaysa Magaalo dhan oo ‘Internet-ka’ ku shaqaysa
Bariga magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa ku taala meel xeeb ah oo aanan la isticmaalin, waxaase hadda la doonayaa in loo badalo magaalo dhan oo xiimaysa, casri ah, islamarkaasna u dhamaystiranyihiin adeegyadeedii oo dhan.
Balse arrintaas waxaa su’aal ka keenay ku xigeenka duqa magaalada Toronto Denzil Minnan-Wong oo yiri “Maxaa hadhoow loo isticmaali doonaa xogtaas, waxaa jira dhibaatooyin kale oo ka jira magaalada Toronto”.
– Baabuur kaligood is wadaya
– Dhismayaal ka samaysan alwaax , kuwaas oo gudaha qofka naqshadda sida uu doono u badeli karo
– Barnaamij lagu xakamayn karo cimilada si dadka waqti badan ugu qaadan karaan banaanka. Waxaa jira meel ay dadka ka gali karaan roobka iyo waliba qalab kuleelka ah oo ay kulaahi karaan marka uu qaboowga jiro.
Qorshaha waxa uu yahay oo kale in la dhiso magaalooyin ku habboon deegaamaynta, iyada oo la’isku dayayo in laga maarmo dhismayaasha dhagaxa, carrada iyo birta ka kooban.